Igumbi leGlasgow Hydro elinendawo yokupaka ekhuselekileyo yasimahla
Igumbi lokulala eli-2 elinesitayile elinendawo yokupaka engaphantsi komhlaba ekhuselekileyo yasimahla, imizuzu emi-5 ukuhamba ukuya kwi-SSE Hydro, kwikhampasi yoMnyhadala waseScotland, iZiko leSayensi laseGlasgow. Ifulethi linomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi ezibonelela ngembono emangalisayo ngaphesheya koMlambo iClyde, eneplani enkulu evulekileyo yokuphumla, indawo yokutyela kunye nekhitshi ehonjiswe kumgangatho ophakamileyo kakhulu, igumbi lokuhlambela le-jacuzzi, ishawari ene-ensuite zombini kunye nezindlu zangasese, ezifikeleleka ngokulula ngezithuthi ezininzi. iinketho, ezimi ngaphandle kweshishini le-M8 elilungele i-intanethi ye-hi speed
Ibekwe kumazantsi oMlambo iClyde, isakhiwo se-QE3 sisakhiwo esinesakhelo esinesitayile sophuhliso lwezindlu zodidi olunobunewunewu obunombono ongephi weGlasgow skyline kunye nemijelo yokukhanya kwendalo kunye nomgangatho ukuya kwiifreyimu zefestile. eli gumbi lokulala li-2 linomlambo ongagqithwanga kunye neembono zesixeko. Ibekwe kwindawo entle ehleli emva kweClyde Arc Bridge, okanye eyaziwa ekuhlaleni njenge "Squinty Bridge" iSSE Hydro Arena kunye neScottish Exhibition and Conference Centre (SECC), yonke imizuzu emi-5 ihambe.
Le ndlu inegumbi elikhulu elivulekileyo lokuphumla / indawo yokutyela kunye nekhitshi kunye neendawo zokujonga amawele ngaphaya komlambo iClyde kunye nombindi wesixeko. Kukho amagumbi amabini okulala, igumbi lokulala elikhulu eline-en-suite elinegumbi lokuhlambela le-en-suite elinendawo yokuhlambela eyamkelekileyo, Igumbi lokulala lesibini ligumbi elinamagumbi amabini okulala, igumbi lokuhlambela linebhafu yeJacuzzi eneshawa yokuxuba kwakhona enezixhobo zangasese ezamkelekileyo, ezihonjiswe kumgangatho ophezulu kulo lonke umsebenzi wobugcisa wokuqala. kunye nempahla ekumgangatho ophezulu. Inokukhanya okukhoyo ngoku kunye nomgangatho womthi oqinileyo kuyo yonke indawo, iflethi lishishini lilungile ngesantya esiphezulu sebroadband kunye nendawo eyahlukileyo yokusebenza.
4.96 ·Izimvo eziyi-168
4.96 · Izimvo eziyi-168
Kumnyango wethu kukho i-SSE Hydro ibala lesithathu lomculo elixakekileyo kwihlabathi elisecaleni kwe-Scottish Events Campus SEC, iZiko leSayensi, elona ziko lomboniso likhulu eSkotlani., I-rmadillo kunye nethiyetha ye-Imax, i-Digital hub ene-BBC NE-ITV.
Imizuzu eli-10 yokuhamba ikusa eFinneston, echongwe yiThe Times ngo-2016 njengeyona ndawo intle yokuhlala e-UK. Imizuzu eli-10 uqhuba okanye uhamba ngemizuzu engama-20 kwaye ukwiziko leSixeko saseGlasgow, esinye sezona zixeko zidlamkileyo nezinobuhlobo e-UK.
Zininzi iibhasi eziya nokubuya eGlasgow ezihamba qho ngemizuzu eli-10 x19, 23,
Sijonge phambili ekubeni uhlale kwigumbi lethu siya kuqhagamshelana buqu ukuze silungiselele ukujonga iinkcukacha kwaye ubekho ngexesha lokuhlala kwakho ukuze ufikelele kubantu abangabanini bepropathi.
Iselikhaya lethu eli, sisahlala apha kodwa hayi ngalo lonke ixesha.
Sijonge phambili ekubeni uhlale kwigumbi lethu siya kuqhagamshelana buqu ukuze silungiselele ukujonga iinkcukacha kwaye ubekho ngexesha lokuhlala kwakho ukuze ufikelele kubantu aba…